Naya Post Nepal | भर्खरै पल साहका वकील मिडियामा, अबको फैसला के ?( हेर्नुहोस भिडियो)
भर्खरै पल साहका वकील मिडियामा, अबको फैसला के ?( हेर्नुहोस भिडियो)
पल साहका वकील मिडियामा मिडियामा आउनु भएको छ । उहाँले पल साहले भेट्दा म यो केस मा नि’र्दोष छु मलाई फ’ साइ’यो,कसरी हुन्छ मलाई या बाट उन्मुक्ति दिन पर्यो मात्र भ न्ने गरेको उनी सुनाउँछन्।
तत्काल प्राप्त प्रमाण द्वा’रा कसुर गरेका हुन् कि भनेर मुदा को अंतिम कार’बाही वा टुंगो लनागेसम्म उनलाई कारागार चनाल गरिएको हो। आधार चाई कागजात, कि’टानी मा भएका कुराह रू , स्वास्थ्य परीक्षण , साथै दुर्गेश थापा लगायत का कुराहरू समावेश गरिएको छ।
अब अदालत को अंतिम आदेश नआएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। अबको १/२ महिना मा सबै कुरा को छिनोफानो लाग्ने छ।
अस्पतालनजिक डेरा बसेको घरको कम्पाउण्डभित्र बिहान ७ बजेतिर उनी मृ”त फे’ला परेको प्र”हरीले जनाएको छ। श’व अहिले घ”टनास्थलमै छ। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ घर भएका अन्दाजी २७ वर्षीय डा. यादव विगत ४ वर्षदेखि विराटनगर–४ स्थित प्रेम बस्नेतको घरको दोस्रो तलाको कोठा भाडामा लिएर डेरा बस्दै आएको प्र”हरीले जनाएको छ।
आफन्तले भने घ”टना शं’का’स्पद रहेकाले ग’म्भीर ढंगले अ नुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। मृ” त फेला परेका डा. यादवको सप्तरीस्थित घरमा रहेका परिवा रका सदस्यलाई पनि घ’टना’का बारेमा जानकारी गराइसकि एको प्रहरीले जनाएको छ।
अहिले प्र”हरी परिचालन गरेर घ”टनाका बारेमा अनुसन्धान था लिएको छ। प्रहरीका अनुसार डा. यादवको मृ”त्युको का’रण खुल्न सकिरहेको छैन। यद्यपि घ”टनास्थलको प्रकृति हेर्दा हा’म ’फा’ले’र उनले दे’हत्या’ग गरेको हुनसक्ने आशंका प्र”हरीले गरे को छ।
२०७८ चैत्र २०, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 1385 Views